MyanNet - Social Web Business is Launched on Public Beta
Submitted by everlearner on Thu, 09/16/2010 - 17:50
ကျွန်တော်တို့ အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ တစ်ယောက်ထဲလုပ်လို့ မရပါဘူး။ အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်၊ ကျွမ်းကျင်သူများနဲ့ ရင်းနှီးမြုတ်နှံလိုသူ လုပ်ငန်းရှင်များ အားလုံး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ အထူးလိုအပ်ပါတယ်။ အခု မိတ်ဆက်ပေးမှာက အဲဒီလို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို အတူတကွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေ ရရှိနိုင်တဲ့၊ ကိုယ့်လုပ်ငန်းနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုတွေကို အင်တာနက်ကနေတစ်ဆင့် လူသိအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ mmshare team ရဲ့ နောက်ထပ် Project တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက်အသစ် တစ်ခုကို မိတ်ဆက်ပေးမှာပါ။
Read more about MyanNet - Social Web Business is Launched on Public Beta
Submitted by mmshare on Sat, 09/11/2010 - 06:47
လွန်ခဲ့တဲ့ ငါးနှစ်ကျော်ကာလက စပြီး ကျွန်တော့် ဘဝမှာ အချိုးအကွေ့တွေ အများကြီး ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ အီလက်ထရောနစ် အင်ဂျင်နီယာ ဘာသာနဲ့ ဘီအီးဘွဲ့ ရခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက် အခုအချိန်မှာ Web Development တွေ လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ သင်ရတဲ့ ပညာနဲ့ လုပ်နေတဲ့ အလုပ် ဘယ်လောက်ကွာခြားခဲ့ပြီလဲ ဆိုတာ မှန်းဆလို့ ရပါတယ်။ အခုပြောပြချင်တာက ကျွန်တော့် အခက်အခဲတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီအချိန် ကတဲက စပြီး စွဲစွဲမြဲမြဲလုပ်လာခဲ့တဲ့ အလေ့အကျင့် ကောင်းလေး တစ်ခုကို ပြန်ပြီး ​ဝေမျှပေးတာပါ။ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ ဘဝခရီး တစ်နေရာရာမှာ အထောက်အကူ ရပါလိမ့်မယ်။
Read more about After5Years Journey of Life
How Many Links Can We Put in the Web Page? - A Webmaster Guideline from Google
Submitted by everlearner on Sun, 09/05/2010 - 14:04
Link များသည် အင်တာနက်တစ်ခုလုံး၏ အသက်သွေးကြော ဖြစ်သည်။ အင်တာနက် စာမျက်နှာများ ရေးသား တည်ဆောက်ကြသည့်အခါ တစ်နေရာမှ တစ်နေရာ၊ အကြောင်းအရာ တစ်ခုမှ တစ်ခုသို့ ချိတ်ဆက်နိုင်ရန် အတွက် Link များ သုံးကြရသည်။ အပျော်တမ်း Blogger တစ်ဦး ဖြစ်စေ၊ Professional Webmaster တစ်ယောက် ဖြစ်စေ Link များကို မှန်ကန်ထိရောက်စွာ အသုံးပြုတတ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ ဤဆောင်းပါးတွင် Web Page တစ်ခုအတွင်း ပါ၀င်နိုင်သည့် Link အမျိုးအစားများ၊ Google Webmaster Guidelines များအရ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် အချက်များကို ဝေမျှသွားပါမည်။
Read more about How Many Links Can We Put in the Web Page? - A Webmaster Guideline from Google
Submitted by everlearner on Mon, 08/30/2010 - 14:20
Website တစ်ခုရဲ့ အမြန်နှုံးဟာ အဲဒီဆိုက်နဲ့ ပတ်သက်နေတဲ့ Webmaster, Website Owner နဲ့ Website Visitor များနဲ့ အများကြီး ဆက်စပ် သက်ဆိုင်နေပါတယ်။ အင်တာနက်ရဲ့ အရေးပါတဲ့ နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Web Performance Optimization မှာ အဓိကကျတဲ့ အချက်တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ GZip Compression အကြောင်း အခြေခံသဘောတရားများနဲ့ Webmaster တစ်ယောက်အနေနဲ့ Server ကို Configuration လုပ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းများ အကြောင်းကို လေ့လာခဲ့ကြပြီးပါပြီ။ အခုဆက်ပြီး WordPress, Joomla, Drupal တို့နဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ Webite တွေမှာ အလွယ်တကူ GZip ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ ဆိုတာနဲ့ Caching ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ ဆိုတာ လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။
Read more about How To Optimize Our Web Sites With GZIP Compression - Part Three - Gzipping WordPress, Joomla & Drupal Sites
Submitted by mmshare on Thu, 08/26/2010 - 13:43
ဗီဒီယိုဖိုင် အမျိုးအစား တစ်ခုကနေ နောက်တစ်ခု ပြောင်းဖို့၊ ဖုန်းထဲက ဖိုင်တွေကို ကွန်ပျုတာမှာ ကြည့်နိုင်အောင် လုပ်ဖို့၊ ကွန်ပျုတာထဲက ဖိုင်တွေကို ဖုန်းထဲမှာ ကြည့်လို့ရအောင် အသွင်ပြောင်းဖို့၊ ဗီဒီယိုကနေ Mp3 ပြောင်းဖို့ စတဲ့ အလုပ်တွေဟာ ဒီနေ့ အင်တာနက် သုံးနေတဲ့ လူအတော်များများ လုပ်နေကြအလုပ်တွေ ဖြစ်နေပါပြီ။ အဲဒီအလုပ်တွေအတွက် အဆင်ပြေပြေ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ WinFF ဆိုတဲ့ အခမဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလေး အကြောင်းကို ဝေမျှ ချင်ပါတယ်။
Read more about WinFF - Ultimate Free Multimedia Conversion Tool for Windows and Linux Users
Submitted by everlearner on Sun, 08/22/2010 - 14:55
Web Server နဲ့ Web Browser တို့ကြားမှာ ဖိုင်တွေ အပို့အယူလုပ်တဲ့အခါ သာမန်ဖိုင်တွေကို ပေးပို့တာထက် Zip လုပ်ပြီး ချုံ့ထားတဲ့ ဖိုင်တွေကို ပေးပို့တာက ပိုမြန်တဲ့ အကြောင်း ပထမပိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ သိခဲ့ကြပြီးပါပြီ။ အခု ဆက်ပြီး ဒီလို Zip ဖိုင်တွေကို အလွယ်တကူ အပို့အယူ လုပ်နိုင်အောင် Webmaster အနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ Server ကို ဘယ်လို ပြင်ဆင် (Configuration) လုပ်ရမလဲဆိုတာ လေ့လာကြရအောင်။
Read more about How To Optimize Our Web Sites With GZIP Compression - Part Two
Submitted by everlearner on Wed, 08/18/2010 - 15:42
Webmaster တစ်ဦး အနေနဲ့ Modern Web Server များနဲ့ Browser များရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အထိရောက်ဆုံး အသုံးပြုနိုင်တဲ့ နည်းပညာ တစ်ခုကတော့ GZip Encoding ကို သုံးခြင်းပါပဲ။ ဒီဆောင်းပါးမှာ GZip Encoding နည်းပညာနဲ့ အဲဒီနည်းပညာကို WordPress, Drupal စတဲ့ Blog Engine တွေ၊ CMS တွေနဲ့ PHP ၊ ASP ဘာသာစကားသုံး ၀က်ဘ်ဆိုက်များမှာ ထည့်သွင်း အသုံးပြုနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကို ေ၀မျှသွားပါမယ်။
Read more about How To Optimize Our Web Sites With GZIP Compression - Part One
Site Map Guidelines, Resources and Tools for Webmasters
Submitted by everlearner on Wed, 08/11/2010 - 16:09
ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုသို့ လာရောက်လည်ပတ်သူများ အတွက် ဝက်ဘ်ဆိုက်မြေပုံ (Site Map) တစ်ခု ပြုလုပ်ပေးထားသင့်ကြောင်း Google ၏ Webmaster Guidelines များတွင် အကြံပြုထားသည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်များ တည်ထောင်ရသည့် ရည်ရွယ်ချက်များစွာ အနက် တစ်ခုမှာ “ရောက်လာသည့် ဧည့်သည်များအတွက် အသုံးဝင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ ပေးရန်” (To provide useful information for Site Visitors & Users) ဖြစ်သည်။ မိမိ၏ Web site ရှိ သတင်းအချက်အလက်များမှာ လာရောက်သူများအတွက် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ ဘာသာရေး၊ နည်းပညာ၊ အတွေးအခေါ်ကောင်း၊ နည်းလမ်းကောင်း စသည်ဖြင့် တစ်ခုခု အကျိုးဖြစ်ထွန်းသွားစေရန် လိုအပ်သည်။ ထို့ပြင် ထိုအချက်အလက်များကို အချိန်တိုအတွင်း ချက်ချင်း တွေ့မြင်သွားစေနိုင်မည့် နည်းလမ်းများ ကိုလည်း ပြုလုပ်ပေးထားရန် လိုအပ်သည်။ ဤအချက်မှာ လူသားဧည့်သည်များ (Human Visitors) နှင့် အင်တာနက် ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် (Internet Search Engines) များကို ဆွဲဆောင်နိုင်သည့် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း တစ်ခု ဖြစ်လေသည်။
Read more about Site Map Guidelines, Resources and Tools for Webmasters
Speed Up Our Websites - Using Parallel Domains to Store Static Contents
Submitted by everlearner on Sun, 08/01/2010 - 08:05
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Website နဲ့ Blog တွေကို နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ပိုမြန်အောင် လုပ်လို့ ရပါတယ်။ အခု ဆွေးနွေးမယ့် အကြောင်းအရာက ဖိုင်တွေကို နေရာခွဲထားပြီး Websiteကို ပိုမြန်အောင် လုပ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာ Web Browser တွေက Server ကနေ ဖိုင်တွေ ရယူပုံဖော်နည်း၊ ဖိုင်တွေကို ခွဲခြားထားရှိလို့ ရတဲ့ နေရာများ၊ Parallel Download အလုပ်လုပ်ပုံ၊ Sub Domain များ ပြုလုပ်နည်း၊ Hosting မှာ Sub Domain အတွက် Configuration လုပ်ပုံလုပ်နည်း၊ Image Hosting Website များကို ဘယ်လိုသုံးမလဲ၊ Single Domain နဲ့ Subdomain များက Website တစ်ခုရဲ့ အမြန်နှုံးနဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် (Speed and Performance) ကို ဘယ်လ
Read more about Speed Up Our Websites - Using Parallel Domains to Store Static Contents
30+ Free Essential Softwares for Windows Computer Users
Submitted by everlearner on Wed, 07/28/2010 - 16:40
ကွန်ပျူတာ အသစ်တစ်လုံးကို ၀ယ်ပြီးတဲ့ အခါမှာ၊ ဒါမှမဟုတ် ရှိပြီးတဲ့ ကွန်ပျူတာကိုပဲ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် Format ချလိုက်ရတော့တဲ့ အခါမှာဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို့ အတွက် မရှိမဖြစ်အသုံး၀င်လှတဲ့ ဆော့ဖ်၀ဲလေးတွေကို တစ်ခုချင်းစီ ပြန်ရှာပြီး ပြန်ထည့်ရတာ အလွန်ပဲ လက်၀င်လှပါတယ်။ ကျွန်တော်ရဲ့ အဓိက အလုပ်က Web Development ဖြစ်ပေမယ့် နီးစပ်ရာလူတွေ၊ တစ်ဆင့်စကားနဲ့ ရောက်လာတဲ့သူတွေရဲ့ ကွန်ပျူတာ ပြဿနာတွေကို ဖုန်း၊ အွန်လိုင်းနဲ့ ဒါမှမဟုတ် အပြင်မှာ Fix လုပ်ပေးတဲ့ အလုပ်လည်း လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရောက်လာတဲ့ ကွန်ပျူတာမှန်သမျှကို အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ Recovery ပြန်လုပ်ဖို့ ကြိုးစားတာပါပဲ။ ကွန်ပျူတာပိုင်ရှင် တွေရဲ့ Data တွေက သက်ဆ
Read more about 30+ Free Essential Softwares for Windows Computer Users